Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Haiti » Madaxweynaha Haiti: Inqilaab iyo isku day dil ayaa la fashiliyey
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Wararka Dowladda • Wararka Haiti • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
"Ujeeddada dadkani waxay ahayd inay isku dayaan noloshayda," ayuu yiri Jovenel Moise
23 qof ayaa loo xiray Haiti 'isku day afgambi'
Madaxweynaha Jovenel Moise wuxuu ku andacooday 'isku day dil' in la fashiliyey
Garsooraha maxkamada sare ee Haiti iyo isbatooraha guud ee booliska ayaa ka mid ah 'tuhmanayaasha' la xiray.
Madaxweynaha Haiti, Jovenel Moise, ayaa ku dhawaaqay in 'afgambi iyo isku day dil' ay fashiliyeen hay'adaha sharci fulinta.
Mas'uuliyiinta dalka ayaa xiray 23 qof, oo uu kujiro garsooraha maxkamada sare iyo sarkaal sare oo booliis ah wixii kadambeeyay waxa madaxweynaha qaranka, Jovenel Moise, uu ugu yeeray 'shirqool' inuu 'isku dayo naftiisa'.
"Ujeedada dadkan waxay ahayd inay noloshayda isku dayaan," Moise ayaa u sheegay suxufiyiinta axadii, isagoo intaa ku daray in qorshahan uu ahaa "mid la iska tuuray." Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in qorshahan uu socday ilaa ugu yaraan dhamaadka bishii Nofeembar, isagoo intaa ku daray in garsooraha maxkamadda sare iyo isbatooraha guud ee booliska ay ka mid yihiin tuhmanayaasha la qabtay.
Wasiirka cadaalada ee qaranka, Rockefeller Vincent, wuxuu ku tilmaamay shirqoolka la maleegay inuu ahaa "isku day afgambi". Maamulka Haiti waxay xaqiijiyeen in ugu yaraan 23 qof la xiray.
Gobolka Kariibiyaanka ayaa haatan ku jira xaalad jahwareer ah sababo la xiriira is-maandhaaf u dhexeeya Moise iyo mucaaradka oo dalbanaya inuu xilka ka dago. Reynold Georges, oo ah qareen mar shaqeysay madaxweynaha laakiin ka dib ku biiray mucaaradka, ayaa ku tilmaamay garsooraha la xiray Irvikel Dabresil - nin sidoo kale la sheegay inuu ku riyaaqay taageerada mucaaradka madaxweynaha.
Mucaaradka ayaa cambaareeyay xarigga waxayna ku baaqeen in si deg deg ah loo sii daayo qof walba oo la xiray, iyagoo ka codsaday dadka reer Haiti "kor u kacaan" ka dhanka ah madaxweynaha. Waxay cadeeyeen in mudada madaxweynenimo ee Moise ay ahayd inay ku egtahay axadan halka madaxweynaha laftiisu ku adkeysanayo inuu xaq u leeyahay inuu sii joogo xafiiska ilaa iyo bisha Febraayo 2022.
Muranka ayaa ka dhashay doorashadii madaxtinimada ee qasan ee dhacday 2015. Waqtigaas, Moise markii hore waxaa lagu dhawaaqay inuu guuleystey laakiin natiijooyinka codbixinta kadib waa la joojiyay kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq. Sidaas oo ay tahay, Moise si guul leh ayaa loo doortay sanadka dambe aakhirkiina waxaa loo dhaariyay xafiiska Febraayo 2017. Qalalaasaha doorashada awgeed, qaranka waxaa xukumayay madaxweyne kumeelgaar ah muddo hal sano ah.
Moise wuxuu kaloo xukumayay digreeto tan iyo bishii Janaayo 2020 markaas oo muddadii baarlamaanka ee ugu dambeysay ay dhammaatay laakiin aan la qaban doorashooyin guud. Haatan, Haiti ayaa la filayaa inay qabato doorashada baarlamaanka bisha Sebtember - bilo kadib afti dastuurka loo qorsheeyey Abriil taas oo la filayo inay madaxweynaha siiso awood dheeri ah.
Sanadihii la soo dhaafay, dalka waxaa sidoo kale ka dhacay mudaaharaadyo ballaaran oo dadweyne oo ka dhan ah musuqmaasuqa iyo dambiyada ba'an ee baandooyinka. Sidaas oo ay tahay, Moise wuxuu ku raaxeysanayaa taageerada maamulka Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Ugu dambeyntiina, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibedda Mareykanka, Ned Price, wuxuu yiri “madaxweynaha cusub ee la doortay waa inuu bedelaa madaxweyne Moise marka uu waqtigiisa dhammaado bisha Febraayo 7, 2022,” isagoo markaa qaatay mowqifka Moise ee khilaafka mucaaradka.
Si kastaba ha noqotee, wuxuu sidoo kale ku booriyay Haiti inay si sax ah u abaabusho doorashooyinka guud bisha Sebtember si baarlamaanka loogu oggolaado inay dib u bilaabaan shaqadooda.